Komiti yeParamende Yoshorerwa maBond Notes kuChinhoyi
Vamwe vagari vemuChinhoyi vanoti danho reparamende rekunzwa zvinofunga veruzhinji pamusoro pekuparurwa kwemari yema bond notes kutambisa mari yenyika sezvo pfungwa dzavo dzisisashandiswe.
Vachitaura neChishanu muChinhoyi vazhinji vevataura vashoropodza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemari nekusimudzirwa kwehupfumi dzanga dzichitsvaka mazano panyaya yekuparurwa kwemari yema bond notes vachiti hazvina zvazvichabatsira sezvo mari iyi yave kutoshandiswa zvichipesana nezvaida vanhu vakawanda.
Mumwe wevataura pamusangano uyu, VaGivemore Chari, vanoti kufamba kuri kuita vamiriri veparamende kungoita kuti vazadze homwe dzavo nemari yavanowana sezvo mutemo wakatotarwa kare.
VaChari vanoti vamiririri veparamende havasi kumiririra vanhu asi kuti vave kutotsigira vatongi vari kudzvanyirira veruzhinji nekuda kwetumari twavari kuwana mukufamba uku vachiti vari kunzwa pfungwa dzevanhu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuChinhoyi, VaLawrence Mlambo, vanoti nhengo dzeparamende hapana zvadziri kuita asi vari kutsvaka mari yekushandisa pakisimusi sezvo gore rave kupera.
Pamboita kukandidzana makobvu nematete pakati pevanhu vapinda musangano uyu apo vazhinji vanga vave kusveveredza avo vanga vachitsigira kushandiswa kwema bond notes.
Amai Marther Munondo vanoti hurumende inofanirwa kutendwa nekuunza mari yema bond notes sezvo mari yekuAmerica iri kunetsa kuwana uye isingakwanise kuwedzerwa nekugadzira imwe.
Vagari vemuChinhoyi vatiwo midziyo yehurumende inenge yasakara sedzimotokari dzinofanirwa kutengeswa pajekerere kwete zvechihwande hwande izvo zvinozopa kuti vakuru vakuru vehurumende vawane midziyo yose.
Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vashoma vasingasvike makumi matatu.
Komiti yeparamende iyi iri kufamba mumatumhu akasiyana siyana ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pema bond notes.